ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်လုပ်ကိုင်လိုသော အသင်းဝင်စက်ရုံများအား ကနဦးသိရှိရသောသတင်းအချက်များနှင့် လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည့် Coronavirus Disease 2019 (COVID – 19) ကာကွယ်၊ထိန်းချုပ်၊ကုသရေး ညွှန်ကြားချက်များကို အသိပေးမျှဝေခြင်း – MGMA
Myanmar Garment Manufacturers Association
Monday-Friday 9:30 AM-5:30 PM Contact Email
[email protected] Phone Number
Background of MGMA
CSR Activities of MGMA
MGMA’s CEC-EC List
Business Registration Workflow
MIC Application Workflow
Fully Online Lincense
Upcoming Events & Exibitions
Guideline towards amfori BSCI
Posted 20 days ago | by MGMA PRO | in News & Events, Recent News
ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်လုပ်ကိုင်လိုသော အသင်းဝင်စက်ရုံများအား ကနဦးသိရှိရသောသတင်းအချက်များနှင့် လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည့် Coronavirus Disease 2019 (COVID – 19) ကာကွယ်၊ထိန်းချုပ်၊ကုသရေး ညွှန်ကြားချက်များကို အသိပေးမျှဝေခြင်း
Factory Awards (6)
Press Released (1)
Recent News (136)
Post Archives Select Month October 2020 September 2020 August 2020 July 2020 June 2020 May 2020 April 2020 March 2020 February 2020 January 2020 December 2019 November 2019 October 2019 September 2019 August 2019 July 2019 June 2019 May 2019 March 2019 February 2019 December 2018 November 2018 October 2018 September 2018 June 2018 May 2018 March 2018 February 2018 December 2017 November 2017 October 2017 September 2017 June 2017 February 2017 October 2016 August 2016 June 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 June 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 November 2014 September 2014
ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်လုပ်ကိုင်လိုသော အသင်းဝင်စက်ရုံများအား ကနဦးသိရှိရသောသတင်းအချက်များနှင့် လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည့် Coronavirus Disease 2019 (COVID - 19) ကာကွယ်၊ထိန်းချုပ်၊ကုသရေး ညွှန်ကြားချက်များကို အသိပေးမျှဝေခြင်း
20 days ago by MGMA PRO 58
COVID – 19 ရောဂါကုသရေးဌာန (အောင်မြင့်မိုရ်အိမ်ရာ) သို့ ပစ္စည်းများ လှုဒါန်းခဲ့ခြင်း
28 days ago by MGMA PRO 47
Stay at Home ၁၄ ရက်ကာလအတွက် အလုပ်သမားများအား လစာမဲ့ခွင်ဖြင့် အလုပ်အကိုင်တည်မြဲမှုအာမခံချက်ပေးရန် တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ခြင်း
September 23, 2020 by MGMA PRO 82
ရန်ကုန်အထွေထွေရောဂါကုဆေးရုံသစ်ကြီး သို့Surgical Gown အစုံ (၁၀၀၀)လှုဒါန်းခဲ့ခြင်း
September 18, 2020 by MGMA PRO 22
ဆေးတက္ကသိုလ် (၁) (လမ်းမတော်,ရန်ကုန်) သို့ Surgical Gown များလှုဒါန်းခြင်း
September 18, 2020 by MGMA PRO 28
၂၀၂၀ ခုနှစ်၏ (၇)ကြိမ်မြောက် (၇/၂၀၂၀) Executive Committees (ECs) အစည်းအဝေးကျင်းပခဲ့ခြင်း
September 14, 2020 by MGMA PRO 58
အသင်း၏ဝန်ဆောင်မှု နှုန်းထားများ လျှော့ချခြင်း သတ်မှတ်ကာလကို တိုးမြှင့်ခွင့်ပြုကြောင်းအကြောင်းကြားခြင်း
August 31, 2020 by MGMA PRO 53
9 Floor, UMFCCI Tower 29 Min Ye Kyaw Swar Street, Yangon, Myanmar
Monday-Friday, 9:30 AM-5:30 PM
ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်လုပ်ကိုင်လိုသော အသင်းဝင်စက်ရုံများအား ကနဦးသိရှိရသောသတင်းအချက်များနှင့် လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည့် Coronavirus Disease 2019 (COVID – 19) ကာကွယ်၊ထိန်းချုပ်၊ကုသရေး ညွှန်ကြားချက်များကို အသိပေးမျှဝေခြင်း October 11, 2020
COVID – 19 ရောဂါကုသရေးဌာန (အောင်မြင့်မိုရ်အိမ်ရာ) သို့ ပစ္စည်းများ လှုဒါန်းခဲ့ခြင်း October 3, 2020
The 9th Myanmar Int’l Textile & Garment Industry Exhibition (18 – 21 December 2020)
Garment & textile factories (both local & foreign-owned) who operate production facilities within Myanmar.
© 2018 All Rights Reserved. Copyright by MGMA. Designed by WWM